IBulltech ™ yiShishini leSizwe eliPhezulu lobuchwephesha lase China. I-Bulltech ™ inamalungelo awodwa omenzi wechiza aqinisekisiweyo, azinikele kwi-R & D, kwimveliso kunye nasekuthengiseni izixhobo zesicelo se-laser, ngetekhnoloji ephambili yokujonga kunye nolawulo, iBulltech ibonelela ngeSisombululo seMveliso yoLungiso lweLaser yeLaser kubathengi behlabathi phantse iminyaka engama-20, ukuthengisa kunye nenkonzo yenethiwekhi Amazwe angama-20 kunye nemimandla.
I-Bulltech ™ ibonelela ngezixazululo zoLungiso lweeMveliso zibandakanya izixhobo, izinto ezisetyenziswayo, iinkonzo zobugcisa, njl.njl kubathengi kumashishini amaninzi: iAviation, amandla, ezonyango, umngundo wezezimboni, ukuThengiswa kweMoto, ukuPhathwa kweMetal, ukuThengisa kunye namanye amashishini ahambelanayo.
Nge-CE, i-ISO, i-FDA eqinisekisiweyo, iBulltech iya kuqhubeka nokunceda abathengi bethu ukunciphisa iindleko, ukuphucula ukusebenza kunye nokwenza ixabiso ngokujonga itekhnoloji kunye nolawulo lomgangatho.
Laser yenza imveliso lula
Intengiso ephambili kunye neCore Optical Technology kunye neTekhnoloji yoLawulo
Sinyanzelisa ukubonelela ngeenkonzo zobunjineli bendawo, sithethe ulwimi lwasekhaya kwaye siziqonde ngokucacileyo iimfuno zomthengi.
Sibonelela ngeemveliso kunye neenkonzo ezikumgangatho ophezulu ngamaxabiso afikelelekayo, abonelela abathengi bethu ukhuphiswano oluphezulu kwishishini labo.
Sibonelela ngeyona ndlela isebenziseka lula kunye nezisombululo. Ukusebenza ngokulula, ukugcinwa okulula, izinto eziguquguqukayo eziqinisekisa abathengi bethu ngemveliso ephezulu kunye nokufumaneka ngexabiso eliphantsi lokusebenza.
Sisebenzisa awona macandelo afanelekileyo kolu shishino kwaye adityaniswe nomgangatho ophezulu wolawulo lomgangatho kunye nenkqubo yasemva kwenkonzo ukuqinisekisa ukusebenza okuhle nokuzinzileyo koomatshini bethu.
Abathengi bethu kunye nabathengisi banokuthembela kuthi kuba sibanika ukhuseleko, ukuqhubeka, kunye nokwenza izinto elubala.
Sibonelela ngenkxaso yemali kubathengi bethu abathembekileyo okanye abathengisi bezemali ukubanceda ukuba bavelise ukuhamba kwemali okunempilo kunye nenzala yeZero.